DHAGEYSO: Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo si cajiib ah uga hadlay loolanka kala dhaxeeya Kenya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo si cajiib ah uga hadlay loolanka...
Madaxweynaha Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle
New York (Halqaran.com) – Madaweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay tartanka ay dawladdiisu kula jirto dawladda Kenya ee ku aaddan kursiga aan joogtada ahayn ee Qaramada Midoobey.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dawladood aysan wanaagsanayn in uu u xumaado sabab la xiriirta tartanka kursigaas ee ay ku tartamayaan.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa waxa uu cambaareeyay qaar ka mid ah dalalkii ka tirsanaa Midowga Afrika, kuwaas oo Kenya ugu codeeyay 21-kii bishii August in ay ku guulaysato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka Qaramada Midoobey.
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Xiisad ka dhalatay dad lagu laayay Galgaduud
Mr. Geelle ayaa sheegay in dawladda Jabuuti aysan wali tanaasulin oo ay sugayso in ay Golaha Ammaanka ugu tartanto.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hadalkan ku sheegay, wareysi uu siiyay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da. Waxayna noqoneysaa kii ugu horeeyay ee uu kaga hadlo kursigaas oo ay Kenya kula tartamayso dawlada Jubuuti.
Halka Hoose ka Daawo Codka Madaxweyne Geelle:
Loolanka kala dhaxeeya Kenya